Sarotra sarotika endrika miafina ho fiarovana China Manufacturer
Description:Saron-tava voaroaka,Miatrika fitsaboana mask,Maskà fitsaboana 10pcs
Home > Products > Saron-tava > Sarotra sarotika endrika miafina ho fiarovana
famokarana: 100000 pieces per day
Ny saron-tava momba ny fitsaboana medaly dia matetika vita amin'ny sosona iray na maromaro. Ny dingana lehibe amin'ny famokarana dia ahitana ny rivotra mitsoka, spunbond, rivotra mafana na acupuncture, sns. Izy ireo dia afaka manohitra ny ranon-javatra, ny singa sivana sy ny bakteria. Izy ireo dia lamba fitaovam-pitsaboana.
Ny saron-tava momba ny mason-jaza momba ny endrika endrika manala endrika ny endrika Discposable . Ny vatan'ny saropady fitsaboana dia mizara ho telo sosona: anatiny, afovoany sy ivelany. Ny sosona anatiny dia fitaovana savononin'ny hoditra (lamba fantsom-pahadiovana mahazatra na lamba tsy vita amin'ny landy), ny antonony afovoany dia ny filaharam-bazom-bazana (ultra-fine polypropylene fibre melt blown materiales), ary ny mason-jaza medaly ivelany ivelany dia fitaovana manokana bacteriostatic layer (tsy - lamba vita amin'ny lamba vita amin'ny polypropylene na ultra-manify.
Fandidiana masikaly fanaingoana: 50pieces / boaty
Mask mpitsabo vaovao PP tsy lamba vita amin'ny lamba , ny lamba dia mazava, malefaka, milentika ary mahazo aina.
Drafitra lafatra telo, habaka famonosana tarehy dia manamora ny fifohana rivotra
Plastika orona plastika, vy-plastika orona plastika, mora asiana, mety tsara amin'ny tarehy
Endrika masika :
1. Telo sosona fiarovana, fanorana mahomby.
Trano fitambaran-tsipika maro be, tohodrano miaro ny sosona, manivana manimba, mahomby ary manivana ny karazana loto rehetra amin'ny rivotra.
2. Sariaka hoditra, fofonaina, sivana, matevina, azo antoka
Aseho Medical Mask
Fanontaniana momba ny mpitsabo :
1.Hatrinona ny faharetan'ny tarehy?
Rehefa simba ny mason-tava dia maloto na mihamitombo ny fanoherana ny taovam-pisefoana, mila manolo azy isika. Noho ny antony fanadiovana manokana dia manoro hevitra ny fanoloana ny farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro isika.
2. Azo sasana ve ny saron-tava?
Ny mpandray anjara amin'ny sangan'asa matihanina dia tsy azo sasana sy tsy mahalefaka, fa raha tsy izany dia simba ny fitaovana sivana sy ny firafitry ny respirator.
3. Ny saron-tarehy dia misy fofona hafahafa？
Ny saron-tava dia tsy misy fofona. Ny fofona menaka dia ny fofona disinfection ao amin'ny orinasa. Raha mora tohina izany dia azo esorina amin'ny alàlan'ny fampidinana alohan'ny hampiasana azy.
Product Categories : Saron-tava
Sarotra mason-tarehy natokana ho an'ny fiarovana -50pcs / boaty Contact Now
Sarotra sarotika endrika miafina ho fiarovana Contact Now
Fotom-bidy moka momba ny vava 3 Layer miaro amin'ny landihazo 100%, azo averina na azo averina Contact Now
10 Masinina matihanina azo ekena matihanina Pcs Contact Now
Mask madika fitsaboana mety tsara Contact Now
Masky fanaovam-panavotana ho an'ny vovoka sy ny fiarovana Contact Now
Sofina miloko sofina mampientam-boly Mask Contact Now
50 pcs Masika Famonoana endrika manosotra 3-Ply Contact Now
Saron-tava voaroaka Miatrika fitsaboana mask Maskà fitsaboana 10pcs Saron-tava fitsaboana Saron-tava Saron-tava tsara indrindra saron-tava feno tarehy Saron-tava 3-Ply